Nagu Saabsan - Huaian Junbao Qalabka Mashiinka Mashiinka Mashiinnada Xaragada, Ltd.
Kusoo dhawow Jiangsu Huaian Junbao Qalabka Mashiinka Mashiinka Qalabka ee Co., Ltd. Waxaan ku takhasusay soo saarida waalka xakameynta qulqulka jihada, tuubada xakameynta hawo-hayaha, xakameyn dhowr ah oo matoor ah, cadaadis sare oo badan oo deked ah iyo iwm. Waxaan bixin karnaa P40 Series, taxanaha P80, taxanaha RD5200, taxanaha SD WAVOIL, taxanaha DCV, ZD taxane, taxanaha CDB iyo wixii la mid ah 30L / min ilaa 400L / min, Cadaadiska ayaa u dhexeeya 16Mpa ilaa 50MPa iyo qulqulka kale ee cadaadiska aadka u sarreeya. , wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu dabaqaa beeraha, dhismaha, batroolka, kalluumeysiga, macdanta iyo warshadaha kale.
Waxaan ku noqonay hogaamiyaha warshadaha. Hadana waxaan had iyo jeer ku dadaalaynaa qaabeynta, baarista, soo saarida alaabo cusub iyadoo loo eegayo suuqa iyo codsiyada macaamiisheena.Alaabooyinkayagu waxay horey u dhoofiyeen Koonfur Bari Aasiya, Australia, Bariga Dhexe, Afrika iyo Latin America iyo iwm ， sidoo kale waxay ku heleen sumcad wanaagsan dukaankan.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan sii wanaajineyno nidaamkayaga maaraynta ganacsiga iyo nidaamka adeegga iibka ka dib, si aan macaamiisha u siin karno shaqada ku xirnaanshaha tuubooyinka ugu fiican ee musqulaha iyo matoorka qalabka, oo ay taageerayaan adeeggeenna aadka u fiican. Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa sidii aan u buuxin lahayn baahida macaamiishayada oo dhan.
Waxaan nahay meesha kuugu fiican ee alaabada tayada leh iyo adeegga ku jiheynta xalalka 24 saac maalintii.